Wararkii ugu dambeeyey dagaal culus oo ka socda deegaanka Bacaadweyn - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey dagaal culus oo ka socda deegaanka Bacaadweyn
Wararkii ugu dambeeyey dagaal culus oo ka socda deegaanka Bacaadweyn
Bacaadweyn (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaarayo deegaanka Bacaadweyn ee Gobolka Mudug ayaa sheegayo in halkaas uu dagaal ku dhex marayo dhowr saacadood dadka Deegaanka iyo Mitarliga Soomaaliya oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab.
Sida aan xogta ku helnay, dagaalka ayaa yimid markii dhowr hoobiye lagu soo tuuray Magaalada Bacaadweyn kadibna waxaa halka hoobiyayaasha laga soo tuuray ku baxay ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda waxaana kadib sidaas ku bilowday dagaal culus oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan.
Dagaalka ayaa maqribnimadaan wuxuu xoogiisa ka socdaa duleedka Bacaadweyn, waxayna dadka deegaanka sheegayaan in khasaaro xoog leh la gaarsiiyey ciidamadii ka tirsanaa Al-Shabaab ee dagaalka soo qaaday.
Qaar ka tirsan meydadka kooxda Al-Shabaab ayaa daadsan duleedka Magaalada Bacaadweyn, sidoo kale waxaa jiro khasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada Dowladda iyo kuwa Shacabka ah ee u abaabulan hab Beeleed.
Bacaadweyn waxaa ku sugan wafdi uu hoggaaminayo Sanetor Cabdi Qeybdiid, isla markaana ay qeyb ka yihiin xubno ka tirsan maamulka Galmudug, kuwaas oo gaaray maalmo ka hor si ay ugu kuur galaan xaalda nololeed ee ka jirta deegaankaas.
Al-Shabaab ayaa marar badan weerarro aysan u kala harin ku qaaday Bacaadweyn, balse dadka deegaanka iyo ciidan tiro yar oo ka tirsan qeybta 21-aad ee militeriga Soomaaliya ayaa uga guuleystay dagaaladii ka dhacay deegaanka.
Dowladda iyo Al-Shabaab labadaba weli kama aysan hadlin dagaalka Bacaadweyn maadaama uu weli dagaalka socdo, waxaana labada dhinac soo kala gaaray gurmad ciidan oo xoog leh.
Wixii warar ah ee kusoo kordha kala socdo Caasimada Online.